၂၀၂၀ တွင် SingleCare တွင်အများဆုံးတွေ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးသင်တန်း ၁၀ ခု - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
နှိပ်ပါ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> ၎င်းတို့သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် SingleCare တွင်အများဆုံးဖြည့်ထားသောမူးယစ်ဆေးသင်တန်းများဖြစ်သည်
ဆေးဆိုင်တွင်ငွေချွေတာသည့်အခါ SingleCare သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကဒ်ပြားကိုဆေးညွှန်း ၁၀,၀၀၀ ကျော်ဖြင့်လျှော့စျေးပေးနိုင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများသည်ထိုငွေစုငွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးသိုင်းရွိုက်ဆေးမှအူလိမ်းသည့်ဝက်ခြံကုသမှုအထိဆေးသောက်သည့်ဆေးညွှန်းကိုဖြည့်တင်းသည်။
၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အသုံးအများဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းသို့ရောက်သောအခါများစွာသောလမ်းကြောင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သိုင်းရွိုက်အေးဂျင့်များနှင့်ဆီးချိုရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတို့ကဲ့သို့အမေရိကန်နိုင်ငံများအကြားနှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းများပျံ့နှံ့နေခြင်းကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် anti-hypertensives သည်ရေပန်းစားသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဗီတာမင်များ၊ နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးများနှင့်ဆေးမသောက်ဆေးများလည်းလိုအပ်သည်။ COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူစိတ်ကျဆေးများသည်မြင့်မားစွာအဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်စုံဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်း *
စာရင်းအပြည့်အစုံတွင်တွေ့ရှိရမည့်နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်များစွာရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးစရာမလိုဘဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ SingleCare ရှိအသုံးအများဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါး ၁၀ မျိုး (နှင့်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတွင်ထိပ်ဆုံးဆေး ၅ မျိုး) ကိုကြည့်ပါ။
မူးယစ်ဆေးအတန်း လူကြိုက်များ Rx
၁ lisinopril ကူပွန်ကိုရယူပါ
lisinopril / hydrochlorothiazide ကူပွန်ကိုရယူပါ
ရယူပါlosartan / hydrochlorothiazide ကူပွန်
၂ trazodone ကူပွန်ကိုရယူပါ
3. သိုင်းရွိုက်အေးဂျင့် levothyroxine ကိုရယူပါကူပွန်
4. Analgesics / anti-inflammatories ibuprofen ကူပွန်ကိုရယူပါ
၅ metformin ကူပွန်ကိုရယူပါ
metformin ER ကူပွန်ကိုရယူပါ
Lantus Solostar ကူပွန်ကိုရယူပါ
၆။ ဗီတာမင်များ ဗီတာမင်ဒီကူပွန်ကိုရယူပါ
ဗီတာမင် D3 ကူပွန်ကိုရယူပါ
ဗီတာမင် B-6 ကူပွန်ကိုရယူပါ
ဗီတာမင် B-1 ကူပွန်ကိုရယူပါ
၇။ ပင်နီဆီလင် amoxicillin ကူပွန်ကိုရယူပါ
amoxicillin / clavulanate ကူပွန်ကိုရယူပါ
penicillin v ပိုတက်စီယမ်ကူပွန်ကိုရယူပါ
၈ triamcinolone acetate ကူပွန်ကိုရယူပါ
၉ metoprolol succinate ER ကူပွန်ကိုရယူပါ
metoprolol tartrate ကူပွန်ကိုရယူပါ
၁၀ cetirizine ကူပွန်ကိုရယူပါ
မြင့်မားသောသွေးတိုးဆေးဝါးများသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် SingleCare ကဒ်သုံးစွဲသူများအကြားတွင်အများဆုံးသောမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bethesda၊ မေရီလန်းပြည်နယ်ရှိအခြေခံစောင့်ရှောက်မှုဆရာ ၀ န်နှင့် internist အတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ မMဲ Mintz, MD, FACP ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ (COVID-19 ပင်) သေဆုံးမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Mintz ကပြောကြားသည်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအဓိကဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုမှာသွေးတိုးသို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါဖြစ်သည်။ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းသည်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည် (ယူအက်စ်တွင်သေဆုံးမှု၏ဒုတိယအကြီးဆုံးအကြောင်းရင်း)၊ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။120/80 mmHg အောက်သွေးပေါင်ချိန်၊အရ နှလုံးရောဂါ၏အမေရိကန်ကောလိပ် ။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ များစွာသောအမေရိကန်တွေဟာပြိုလဲနေပါတယ်။ ၄၅% ဟာသွေးတိုးရောဂါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC) နှင့် ၄ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်သာ၎င်းတို့၏အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားခြင်းကဲ့သို့သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုကသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရာမှာရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားစေနိုင်သော်လည်း၊ သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံမိမိတို့ဘာသာအလုံအလောက်မရှိကြပါ။
အသက်အရွယ်ကြီးရခြင်းကြောင့်သွေးပေါင်တက်ခြင်းကိုများစွာထိခိုက်သည်ဟုဒေါက်တာမင့်ကပြောကြားသည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏သွေးကြောများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသွေးပေါင်ချိန်တက်လာသည်။ တစ်ချိန်ကသွေးတိုးရောဂါကိုသဘာဝအိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဟုယူဆခဲ့ကြသော်လည်းသွေးတိုးခြင်းကိုကုသခြင်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယခုသိပြီ။
သူတို့နာမည်ရှိသော်လည်းစိတ်ကျဆေးအမျိုးအစားတွင်ပါ ၀ င်သောဆေးဝါးများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသပေးပြီးယေဘူယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းရောဂါ (GAD)၊
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသန်း 40 သန်းသောလူကြီးများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါရှိသည် အမေရိက၏စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါအသင်း သေးသေးထိုလူများ၏ ၃၇% သည်ကုသခံနေရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုကိုအသုံးပြုသောအခြားအလားအလာရှိသောအချက်တစ်ချက်မှာကူးစက်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ လူအများစုအတွက်စိတ်ရောဂါပြquနာသည် quarantine တွင်အထူးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် လေ့လာမှုတစ်ခု စိတ်ကျရောဂါနှုန်းကိုဒီအတိတ်တစ်နှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူကြီးများအကြားသုံးဆပါပြီ။
အမေရိကန်များအကြားအခြားအဖြစ်များသောရောဂါတစ်ခုမှာသိုင်းရွိုက်ရောဂါဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၁၂% ကျော်သည်သူတို့၏တစ်သက်တာအတွင်းသိုင်းရွိုက်အခြေအနေကိုဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ အမေရိကန်သိုင်းရွိုက်အသင်းအဖွဲ့ ။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အမျိုးသားများထက်ပြdevelopနာဖြစ်ပွားရန်ငါးဆမှရှစ်ဆပိုများသည်။
သိုင်းရွိုက်အခြေအနေများ - သိုင်းရွိုက်သည်ဟော်မုန်းအမြောက်အများထုတ်လုပ်သည့် hyperthyroidism မှ hypothyroidism သို့ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းတွင်သိုင်းရွိုက်သည်အလွန်နည်းသောဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်သည်။hypothyroidism အတွက်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသော်လည်းအသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ Hashimoto ၏သိုင်းရွိုက်ရောဂါဟုလူသိများသည့် autoimmune ရောဂါဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာ Mintz ကဆိုသည်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းမလုံလောက်သောလူနာများသည် levothyroxine ကဲ့သို့သောသိုင်းရွိုက်အစားထိုးခြင်းကိုများသောအားဖြင့်လိုအပ်သည်။ ၎င်းမပါဘဲလူနာများသည်ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည့်သိုင်းရွိုက်နိမ့်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
4. Analgesics / anti-inflammatories
အများအားဖြင့်နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးများဖြစ်သည့် analgesics ဆေးများသည်ဆေးယဉ်ပါးတီဘီမှသည်ဆေးညွှန်းဆေးများ (meloxicam) အထိပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် SingleCare ကဒ်သုံးစွဲသူများအကြားလူကြိုက်အများဆုံး analgesic ဆေးသည် ibuprofen ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Advil သို့မဟုတ် Motrin အဖြစ်တံဆိပ်တပ်ထားသော ibuprofen သည် anonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAID) သည်အဖျားနှင့်နာကျင်မှုကိုကုသရာတွင်ဆေးညွှန်းမပါဘဲရရှိနိုင်သည်။ (ဆရာဝန်များက ibuprofen ကိုပိုမိုမြင့်မားသောဆေးပမာဏဖြင့်လည်းညွှန်းနိုင်သည်။ ) NSAIDs များအပြင်ဆေးဆိုင်မှူးက ibuprofen သည် GI အုပ်စုတွင်နူးညံ့ဆုံးဖြစ်သည်။
SingleCare ၏ 2020 စာရင်း၏အလယ်တွင်နားတွင်ပျံဝဲနေခြင်းမှာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဝါးများဖြစ်ပြီး metformin (အများအားဖြင့် Glucophage, Riomet, သို့မဟုတ် Glumetza ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသည်) ဆေးဝါးများဖြစ်သည်။
Metformin သည်သကြားဓာတ်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။Kristi C. တောရက်စ်, Pharm.D ကပြောပါတယ်။ Austin, တက္ကဆက်၌, SingleCare ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ။ဂလူးကို့စ်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ ဒါဟာအစဂလူးကို့စ၏အူလမ်းကြောင်းစုပ်ယူလျော့နည်းစေသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအရံဂလူးကို့စအသုံးချတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အင်ဆူလင် sensitivity ကိုတိုးတက်စေပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ရလဒ်မှာသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏနည်းပါးခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါလူနာများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်သန္ဓေသားထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ CDC ခန့်မှန်းထားသည် (၃၄.၂) သန်းသောအမေရိကန်များ (အားလုံးသောအသက်အရွယ်များ) တွင်ဆီးချိုရောဂါရှိကြသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် SingleCare သုံးစွဲသူများအကြားဗီတာမင်များသည်အခြားလူကြိုက်များသောဝယ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီတာမင် D (ပုံစံအမျိုးမျိုး) သည်ပြိုင်ဘက်များထက်များစွာဝေးကွာသည်။ ဗီတာမင် D သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအခန်းကဏ္ number များစွာပါဝင်ပြီးကယ်လစီယမ်စုပ်ယူမှု၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြွက်သားနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများကိုကူညီသည်။ ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes ။ အလွန်သေးငယ်သောဗီတာမင် D သည်အရိုးကျိုးလွယ်ပြီးကလေးများအတွက် rickets နှင့်လူကြီးများတွင် osteomalacia ဟုခေါ်သည်။ ဖြည့်စွက်ဆေးများအပြင်ဗီတာမင် D ကိုနေရောင်ခြည်နှင့်ဆော်လမွန်နှင့်တူနာကဲ့သို့သောအဆီငါးများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဗီတာမင် D ပြီးနောက်ဗီတာမင်စီသည်လူကြိုက်အများဆုံးဝယ်ယူမှုဖြစ်ပြီးနောက်တွင်ဗီတာမင် B-6 နှင့်ဗီတာမင် B-1 တို့ပါဝင်သည်။
စကော့တလန်သုတေသီဆာအလက်ဇန္ဒားဖလဲမင်းက penicillin ကို ၁၉၂၈ တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာပင်ဤဆေးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသောပantibိဇီဝဆေးဖြစ်လာသည်။ပင်နီဆီလင်မှထုတ်ယူထားသောပiotိဇီဝဆေးများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်ရောဂါပိုးမွှားအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာမင့်ကရှင်းပြသည်။ တခါတရံအလေးအနက်ဖြစ်စေသောဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စဉ် မှလွဲ၍ Penicillin ပantibိဇီဝဆေးများကိုများသောအားဖြင့်လူအများစုသည်ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Penicillin နှင့်၎င်း၏ဆွေမျိုး amoxicillin နား၊ အနိမ့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်အရေပြားရောဂါများအပါအ ၀ င်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများစွာကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ထိရောက်မှုရှိသလောက် amoxicillin သည် penicillin ထက်ဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုးကိုကုသနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မည်သည့်ဆေးပင်ဖြစ်စေ၊ ပင်နီဆီလင်မိသားစုအတွင်းသို့ကျရောက်သည့်မည်သည့်အရာမဆိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကုသရန်အတွက်အသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုသင့်ပါ။
သက်ဆိုင်သော: သင်အမှန်တကယ်ပင်နီဆီလင်ဓာတ်မတည့်မှုရှိပါသလား။ ထပ်မံစစ်ဆေးပါ
နာမည်ကအကြံပြုထားသလိုအရေပြားရောဂါဗေဒများကိုအရေပြားအခြေအနေနှင့် SingleCare အသုံးပြုသူများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်s, triamcinolone cream ကိုလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။အရေပြားအခြေအနေများကို exfoliative dermatitis၊ hypersensitivity တုံ့ပြန်မှုနှင့် lupus နှင့် Stevens-Johnson ရောဂါတို့နှင့်ဆက်စပ်သောတုံ့ပြန်မှုများအပါအဝင်အရေပြားအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ပါးစပ်တွင်းရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ပါးစပ်တွင်လည်းပါးစပ်တွင်း၌အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရေပြားရောဂါဗေဒကဏ္inတွင်အပြေးသမားများမှာဝက်ခြံနှင့်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံအရေပြားကိုကုသသည့် Retin-A ဟုလည်းသိကြသောဗီတာမင် A ထုတ်လုပ်သော tretinoin၊ အမျိုးသားများတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကုသရန်ပါးစပ်တက်ဘလက်ဖြစ်သော Propecia ဟုလည်းလူသိများသော finasteride; အရေပြားယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အရေပြားယားယံခြင်းများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသော hydrocortisone ။
သက်ဆိုင်သော: Psoriasis vs. ekzema: မင်းတို့လည်းဒီလိုမျိုးကုသလို့ရမလား။
Beta blockers သည်ယခုနှစ်တွင် SingleCare သုံးစွဲသူများအကြားတွင်ဒုတိယသွေးပေါင်ချိန်ပေးသည့်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နှလုံးနှင့်သွေးကြောထဲရှိ beta adrenergic receptors များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်အလုပ်လုပ်ကြပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကိုလည်းလျော့ကျစေသည်။ သူတို့ကိုသွေးတိုးရောဂါ၊ အူဂျီနာ (ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း) နှင့်နှလုံးရောဂါအပါအဝင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
Beta blockers များသည်နှလုံးရောဂါခံစားခဲ့ရသောလူနာများအားလည်းမကြာခဏညွန်ကြားလေ့ရှိသည်ဟုဒေါက်တာတောရက်စ်ကပြောသည်။
ထိပ်ဆုံးစာရင်း ၁၀ ခုကိုစာရင်းပြုစုခြင်းသည် histamine receptors များကိုပိတ်ဆို့စေသည့်ဓါတ်မတည့်မှုအခြေအနေများအတွက် antihistamines များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်မတည့် rhinitis (နှာရည်ယိုခြင်း)၊ ယားယံခြင်းနှင့် sensersensitivity တုံ့ပြန်မှုများပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုဒေါက်တာ Torres ကပြောကြားသည်။ Antihistamines များကို bug bite တုန့်ပြန်မှုအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ရေတိုအိပ်မပျော်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Benadryl (diphenhydramine) သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်သိသိသာသာငိုက်မျဉ်းနေသည်ဟုလူသိများပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူကူညီရန်အသုံးပြုသည်။ အချို့သောအခြေအနေများသည်ဆေးဝါးနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် Benadryl မသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ။
သက်ဆိုင်သော: Non-drowsy Benadryl: မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကဘာတွေလဲ။
* အများဆုံးဖြည့်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းများကို opioids နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအပ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ SingleCare မှတဆင့်အသားတင်ဆေးညွှန်းဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်သည်။
သင်၏ lactose သည်းမခံလျှင်မည်သို့ပြောသနည်း
ibuprofen နှင့် tylenol ကိုသင်မည်မျှကြာအောင်သောက်နိုင်သနည်း
mucinexdသောက်နေစဉ်အရက်သောက်နိုင်သလား